Posted by San Su Kyi Naing January 18, 2018
ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်လရင့်လာသည်နှင့်အမှျ ကိုယ်လက် မအီမသာဖြစ်ခြင်းများ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေမှုတေွနဲ့ လက္ခဏာမျိုးစုံကို ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။
1.	သွားဖုံးမှ သေွးထွက်ခြင်း
2.	အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး မူးမေ့တတ်ခြင်း
7.	အဖြူဆင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
အစာစားပြီးတိုင်း ပလုတ်ကျင်း ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးများသည် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီး သွားအောက်ခြေတွင် သွားကျောက်များတည်လာပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း သွားခံတွင်းဆရာဝန်များနှင့် အနည်းဆုံး ၂ကြိမ်ခန့် ပြသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များသည် ထိုင်ရာမှ ရုတ်တရက် ထလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဦးနေှာက်ထဲသို့ သေွးလုံလောက်စွာ မရရှိဘဲမူးမေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဟာ အစားအသောက်ပျက်ပြီး၊ စားချိန်မမှန်ခြင်းကြောင့် အားအင် ကုန်ခမ်းတတ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်နှင့် သံဓာတ်အားတိုးဆေးပါသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးများကို နေ့စဉ်သောက်ရပါမည်။
ကြွက်တတ်ပါက ခြေချောင်းများကို အပေါ်နှင့် ခြေဖနောင့်ဘက်သို့ ဆွဲမပြီး ကြွက်သားကို ဖိပွတ်ပေးရပါမည်။
ခါးနာတတ်တာကတော့ မိခင်၏ ၀မ်းဗိုက်ထဲတွင် ကလေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လွယ်ထားရခြင်းကြောင့် ခါးနားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တို့ အနေနှင့် ပစ္စည်းအလေးမခြင်း၊ ဖိနပ်အမြင့်စီးခြင်း၊ ပစ္စည်းများကို ကုန်းကောက်ခြင်း၊ တို့မပြုလုပ်ရပါ။ ကြာကြာရပ် ကြာကြာထိုင်၊ ပက်လက်မအိပ်ပါနှင့် ပေါင်ကြားထဲ ဖက်လုံးတစ်ခုခုခံထားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ၀မ်းချုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ၀မ်းမှန်စေတဲ့ အစားအသောက်များကို စားသောက်ပေးပါ။ လှုပ်ရှားမှုမရှိရင်၊ ရေသောက်နည်းရင်၊ အမှျင်စားသုံးမှုနည်းရင် ၀မ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ ၀မ်းပျော့ဆေး သောက်၍ရပါတယ်၊ ၀မ်းနုတ်ဆေးတော့ မစားသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် စအိုနားတစ်ဝိုက်ရှိသော သေွးပြန်ကြောများထုံးသွားတတ်ပါတယ်။ယားယံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး နေရထိုင်ရခက်ကာ စအိုမှ အလွယ်တကူသေွးထွက်လာတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအနေဖြင့် လိပ်ခေါင်းမဖြစ်စေရန် ရေများများသောက်ခြင်း၊
အဖြူဆင်းတာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဖြစ်တတ်တာ သဘာဝပါ။
အဖြူဆင်းခြင်း ယားယံခြင်းများ၊ အနံ့ဆိုးများထွက်ပါက သားဖွားမီးယပ်များကို ပြသပေးပါ။
နောက်ပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အနားယူခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုရေှာင်ကြဉ်ခြင်း၊ သင့်တော်သော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အိပ်ရေး ၀၀အိပ်ခြင်းများ၊ စိမ်းချမ်းသာစွာ နေထိုင်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်။